Namaly tifitra teo am-pisamborana azy… : lavon’ny zandary ilay nahafaty ny lehiben’ny Brigade de recherche | NewsMada
Namaly tifitra teo am-pisamborana azy… : lavon’ny zandary ilay nahafaty ny lehiben’ny Brigade de recherche
Par Taratra sur 07/11/2017
Ny volana oktobra taona 2010, maty voatifitry ny jiolahy nikasa hanao fakana an-keriny karana, teny Mahamasina ny lehiben’ny Brigade de recherché, Fiadanana. Nitohy ny fanadihadiana. Ny faran’ny herinandro teo, maty voatifitry ny zandary, teny Alakamisy Ambohimiarina i Tah Kely, iray amin’ireo jiolahy, nahafaty ity lehiben’ny Brigade de recherche ity.
“Ny 28 oktobra 2010, nisy andian-jiolahy nikasa hanao fakana an-keriny Karana teny Mahamasina. Tompon’antoka tamin’izany ity jiolahy antsoina hoe Tah kely ity. Izy koa no nitifitra ny zandary iray niasa tao amin’ny sampana fikarohana heloka bevava eny Fiadanana. Nahazo loharanom-baovao momba azy ny zandary ny faran’ny herinandro ka nanao ny fanaraha-maso rehetra ka izao ity voatifitra teny Ambohimiarina izao”, araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny kaompania Tanà Ville, ny chef d’escadron, Raolijaona Tojo nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety teny Ankadilalana omaly. Ny zava-niseho tamin’izany, nahazo loharanom-baovao ny zandary eny Fiadanana fa misy andian-jiolahy mikasa hanao fakana an-keriny teratany Karana eny Mahamasina. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny zandary ka lavo nandritra ny fifampitifirana ny jiolahy roa raha naratra kosa ny iray. Tafaporitsaka kosa ny sasany tamin’izy ireo ka isan’izany i Tah kely. Voatifitr’ireo jiolahy tamin’io fotoana io kosa ny zandary lehiben’ny sampana fikarohana heloka bevava, ny chef d’escadron, Herlys. Basy mahery vaika PM Mac 49 miisa roa, grenady roa ary PA iray no tratra taorian’ilay fifampitifirana teny Mahamasina.
Basy PA iray sy bala telo tratra…
Tratra tany amin’ity jiolahy namoy ny ainy ity nandritra ny fisavan’ny zandary, ny basy PA iray miaraka amin’ny bala telo izay samy efa nokikisany ny marika ao amin’ny vodin’ilay bala. Raha ny zava-nitranga ny faran’ny herinandro teo, nanao fisafoana niaraka teny Ambohimiarina sy Fenoarivo ny zandary avy ao amin’ny tobim-paritra Itaosy sy Fenoarivo tamin’io fotoana io. Nahatsikaritra dimy lahy nihaodihaody amina tanànan’olona teny amin’iny faritra iny izy ireo nandritra ny fisafoana. Nitifitra avy hatrany ireo jiolahy raha vantany vao nahita ireo zandary. Raikitra ny fifampitifirana ka rotiky ny bala tamin’izany i Tah kely. Rehefa nojerena ny mombamomba ity jiolahy ity dia fantatra fa izy no nitifitra ka nahafaty ny zandary iray niasa tao amin’ny sampana fikarohana heloka bevava eny Fiadanana, ny 28 oktobra 2010.